Fantaro i Kpénahi Traoré, nitantana ny kaonty Twitter @DigiAfricanLang mandritra ny 24-30 Jolay · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Jolay 2019 5:39 GMT
Sary avy amin'ny @kpenahiss.
Amin'izao taona 2019 izao izay ao anatin'ny fanentanana media sosialy hankalazana ny fimaroam-piteny antserasera, hifandimby ireo Afrikana mpikatroky ny teny sy mpanandrateny hitantana ny kaonty Twitter @DigiAfricanLang hizara ny zava-niainany tamin'ny famelomana aina indray sy fampahafantarana ireo fiteny Afrikana. Ny lahatsoratra etoana dia momba an'i Kpénahi Traoré (@kpenahiss) sy izay kasainy horesahana mandritra ny herinandro itantanany ny kaonty.
Kpénahi TRAORÉ no anarako, teraka tany Côte d'Ivoire aho, saingy avy any Burkina Faso. Lehiben'ny tonian-dahatsoratra RFI mandenkan, efi-panoratana amin'ny teny Bambara ao amin'ny Radio France Internationale (RFI) aho. Traikefa lehibe ho ahy ny miasa amin'io fiteny io, satria nihevitra aho taloha fa tsy azo atao na tena sarotra ny manao ny asa fanaovan-gazety amin'ny teny Bambara.
Samogo no fitenin-drazako, na dia lehibe tamin'ny fiteny antsoina hoe Dioula ao Côte d'Ivoire sy Burkina Faso aza aho. Antsoin'ny Maliana hoe Bambara izany, Ny Gineana manao hoe Malinke, ny olona sasany milaza hoe Mandingo.
About the status of the language on internet and offline, I do not know the full extent of it because I'm not an expert of Bambara, it's only my working language. It was a language of traders who traveled from country to country in West Africa a very long time ago. On the internet we can find some sites and blogs that offer to learn Bambara, like Apprendre le bambara; research institutes also have also online libraries BAMBARABIBLIO
Momba ny satan'ny fiteny ao amin'ny aterineto sy ivelan'ny aterineto, tsy fantatro ny halehibeny manontolo satria tsy manam-pahaizana momba ny Bambara aho, fa fiteny hiasako fotsiny izany. Fiteny nampiasan'ireo mpivarotra izay nivezivezy ny firenena any West Africa efa ela be. Afaka mahita tranonkala sy bilaogy izay manolotra fampianarana Bambara, toy ny Apprendre le bambara ao amin'ny aterineto isika; manana tranomboky antserasera, BAMBARABIBLIO ihany koa ireo ivon-toeram-pikarohana
Ao amin'ny sehatry ny gazetiko, manana pejy an-tserasera aho izay ahafahan'ny mpihaino mihaino vaovao amin'ny teny Bambara RFI mandenkan – A ye RFI Mandenkan lamɛn ka ta ntɛnɛn fo juma nɛgɛkannyɛ 8 a nin a kanyɛ 12 Mandendugu waati la.
Mandritra ny herinandro dia hifantoka amin'ny “fanaovan-gazety amin'ny fiteny Afrikana aho”, ny olana amin'ny fitadiavana ny fandikana ny teny na ny fanehoana ny vaovao; ny filàna hamelomana hatrany ny fiteny Afrikana amin'ireo teny mifandraika amin'ny vaovao noho ny fivoaran'ny tontolo. Tiako ny hanazava fa azo atao ihany koa ny fanaovana ny asa fanaovan-gazety amin'ny fiteny afrikana, fomba hifaneraserana amin’ ireo vondrom-piarahamonina izay tsy mahay ny teny Frantsay na Anglisy. Izany no fomba ahafahan'izy ireo mifandray amin'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny vaovao.
Ny fanantenako na ny nofinofiko ho an'ity fiteny ity, dia ny hitohizany hitombo hatrany, hitohy hianarana any an-tsekoly; ary manantena fa indray andro any dia ho azo atao ny manao lahateny ao amin'ny Firenena Mikambana amin'ny fiteny Afrikana, indrindra amin'ny teny Bambara.